कोक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू कोक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB पूर्ण नाम संग ज्ञात एक फुटबल प्रतिभा को पूर्ण स्टोरी प्रस्तुत गर्दछ; जर्ज रिसुर्रेसीयन मेरोडियो. हाम्रो कुकुर बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खातालाई उनीहरूको बचपनको समय सम्म ल्याउनेछ।
कोक बचपन फोटोहरू
विश्लेषणमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धि भन्दा पहिले जीवनको कथा, प्रसिद्धिको कथा, सम्बन्ध, जीवन शैली र व्यक्तिगत जीवनको वृद्धि बढ्दै गएको छ। हाँ, सबैलाई थाहा छ कोक एक राम्रो आक्रमणकारी मिडफील्डर्सहरूमध्ये एक हो जुन यूरोपमा पाइएको छ, जसको साथ एक्वीको उत्तराधिकारी लक्ष्यको लागि आँखा।
कोक लेबल गरिएको Xavi को उत्तराधिकारी। क्रेडिट Teinteresa.es.
तथापि, केवल फुटबलका केही प्रशंसकहरूले कोकको जीवनीलाई विचार गरे जुन धेरै रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, चल्न सुरु गरौं।
कोक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरू गर्नु, उनको पूरा नाम जर्ज रिसुर्रेसीयन मेरोडियो हो। कोक, जसलाई प्रायः भनिन्थ्यो, जनवरी 8 को 1992th दिन मा उनको आमा श्रीमती मरोदियो र उनको बुबा, मेडाड्रिज मा युगेनियो रिसुर्रेसीयन मा स्पेन मा जन्मिएको थियो। तल कोकको आमाबाबुको तस्बिर हो।
कोक आमाबाबु उनको आमा, श्रीमती मरोडियो र पिताजी, श्री युगियोइओ रिसुर्रेसीयन। Instagram को क्रेडिट।
कोकलोन डे लस टेक्स्टस, माड्रिड को एक उपनगर र स्पेनिश स्ट्राइकरहरु, एल्भारो नेगेडोको जन्मस्थान मा जन्मिएको थियो। यसको एउटा शहर जुन म्याद्रिडको केन्द्रमा मात्र 14 किलोमिटर दक्षिण पूर्व रहेको छ।
कोकका बुबाको नामबाट न्याय गर्दै "Resurrección"जुन अंग्रेजी भाषामा"पुनरुत्थान", ... तपाई सजिलै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कोक रोमन क्याथोलिकको घरमा जन्मिएको थियो। नाम "कोक"केवल एक उपनाम हो जुन कोकको ठूलो भाइबाट उत्पन्न भयो।
कोकको सुरुवात जीवन:
कोकले मध्य-परिवार पारिवारिक परिवारबाट जीवन सुरु गर्यो। उनका पिता, यूजीनियो म्याड्रिडमा फैक्टरीमा एक कारखानामा एक कार्यकर्ता थिए, जब उनको मामि एक घरपरिवार थियो जसले उनको प्रिय छोरा, कोक समेत आफ्नो परिवारका सबै सदस्यहरूको हेरचाह गरे।
युवा कोक आफ्नो आमा संग राम्रो समय छ। Instagram को क्रेडिट।
कोकले केवल आफ्नो परिवारको घरमा एक्लै नपुगेका थिएनन्। उहाँ तीन बहिनीहरू थिए, एक भाइ र दुई बहिनीहरू। तिनका भाइबहिनीहरूमध्ये, कोक सधैं तिनीहरूका बचपनको दिनबाट आफ्नो ठूलो भाइ नजिक भएको छ। एक समय मा दुवै राम्रो साथीहरु को एक तस्वीर हो कोक बस6थियो।
कोकको [बायाँ] प्रारम्भिक दिनका उनको भाइ भाइसँग। Instagram को क्रेडिट।
कोक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- क्यारियर बिल्डअप
दुबै भाइहरू तेस्रो आँखाबाट जन्मेका थिएनन् वा के भनिन्छ "एक क्रिएटिव इन्जेन्टि"जो धेरै उल्लेखनीय खेलाडीहरु जस्तै सैंट काजोरला र डेभीड सिल्वा दक्षिण स्पेन बाट थियो।
कोकले चीजहरू फुटबल बलहरूमा ढाडेर बाहिर निस्क्यो, जुन उनले आफ्नो भाइसँग घरमा खेल्थे। जब उनी साथीहरूसँग स्थानीय पिचहरूमा खेल्थे, दुवै भाइहरूले आफ्नो पारिवारिक विशेषताहरूलाई उदाहरण "विनम्र र समर्पित"आफैलाई एक क्यारियर निर्माण गर्न।
कोक र उनको बिहे भाइ। क्रेडिट telecinco.es.
दुर्भाग्यवश, यो केवल कोक थियो जो कोलोनिया डी ला टेक्स्टस को स्थानीय क्षेत्रहरुमा आफ्नो फुटबल संग प्रगति भयो। कोक प्रयासले आफ्नो लाभांश भुक्तानी गर्यो जुन एटलेटिको अकादमी संग उनको नामांकनको लागी भयो।
कोक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
फुटबलको लागि कोकको जुनूनले उनलाई 8 उमेरमा अकादमी अटेलियोको म्याड्रिडमा नामांकन गरेको थियो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… क्लबसँगको कोकको सबैभन्दा राम्रो सम्झनाहरू आउँदा उनीहरूले लेजेंन्डरीको सामना गर्थे फर्नोडो टोरास जसले वर्ष 2001 मा एटलेटिको मैड्रिड वरिष्ठ टोलीमा सामेल हुन्थ्यो।
कोक प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ। क्रेडिट AS अंग्रेजी - डायोर्क एएस.
कोकले आफ्नो लामो खोजीमा टोरेसलाई क्लबको साथ पेशेवर बन्न खोजे। प्रतिभाशाली जवान फुटबलरको रूपमा, उनीहरूले आफ्नो सपनाहरू सत्य बनाउनको लागि तीव्र दृढता पाएका थिए। तल चित्रित रूपमा आफ्नो उमेर समूहको बीचमा सबै भन्दा कम हुनुको साथै, कोकको महत्वाकांक्षाहरू सर्वश्रेष्ठ हुन बन्न पुग्यो।
कोकको प्रारम्भिक वर्ष - उहाँ आफ्नो उमेर-समूहको बीचमा सबैभन्दा सानो हुनुहुन्थ्यो। क्रेडिट AS अंग्रेजी - डायोर्क एएस.
कोक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सडकको प्रसिद्धि
कोक एटलेटिको साथ परिपक्व हुन जारी छ। उनले आफैलाई मात्र बढेको छिटो बढाएन तर अकादमीमा जीवनमा राम्रो तरिकाले बसिरह्यो। कोकले समुन्द्र समूहको माध्यमबाट सरेन प्रगति गरे। एटलेटिको म्याड्रिड वरिष्ठ टीमको साथ उनको पेशेवर सपनाहरू सत्य, ठीक सेप्टेम्बर 19 को 2009th दिनमा।
एटलेटिको म्याड्रिडको साथ युवा कोकलाई विकास गर्दै। क्रेडिट TheHardTackle.
त्यही वर्ष 2009, कोकले आफ्नो नाम एक स्पेनिश राष्ट्रिय टोली भविष्यको ताराको रुपमा बताए। यो थियो किनभने उनी आफ्नो यू-एक्सएनमएक्स स्पेनिस टीमको लागि फाईदा थिए फीफा यू-एक्सएनक्स विश्व कपमा तेस्रो स्थान समाप्त भयो।
कोक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
2012 / 2013 सीजन आदर्श मौसम थियो जुन अन्य कोकहरु जस्तै कोक सँगको देखे Arda Turan। यस सीजनमा, कोक एटलेटिको मैड्रिडको वरिष्ठ टोलीको अपरिहार्य सदस्यों मध्ये एक को रूप मा बाहिर गयो। यो सिजन थियो कि वे Copa del Rey ट्राफी जीतने मा साधन थियो।
कोप उठ्ने फ्याम्प-कपा डिल रे भन्ने। क्रेडिट एटलेटिको म्याड्रिड।
उनको उपलब्धि पछि, कोक निरन्तर प्रभावकारी प्रदर्शन जारी र फेरि, उनले आफूलाई राष्ट्रिय र क्लब दुवै पक्षमा सहायक साधन देखाए। यो एक समय थियो कोकले 21 मा स्पेनी U2013 UEFA युरोपियन च्याम्पियनशिप जित्ने उनको टोलीलाई सहयोग पुर्यायो।
कोक रोडको प्रसिद्धि स्टोरीको। क्रडिटको लागि चारफोरदो
केवल एक वर्ष पछि वर्ष 2014 मा, कोकको शानदार गुजरिए र आक्रमणकारी आक्रमणले लागा को खिताबमा उनको एटलेटिको म्याड्रिडको टीमलाई मद्दत गर्यो।
कोकको लालिगा महिमा। क्रेडिट bein sports
जयवीय उत्तराधिकारी बन्ने:
कोकको क्यारियर आफ्नो राष्ट्रिय टोली संग चोटी एक समय मा आयो Xavi स्पेनिश स्काडबाट रिटायर गर्न सेट गरिएको थियो। केवल स्पेनी मिडफिल्डरको रूपमा भएको थियो जसले बढी लक्ष्य-गोल अवसरहरू, उमेरमै सेटअप गरेको थियो Xavi कोकले आफ्नो उत्तराधिकारीलाई राष्ट्रिय पक्षमा बनाउन निर्णय गरे।
कोक, Xavi को लागि उत्तराधिकारी को लेबल। Instagram को क्रेडिट।
"उहाँ असाधारण छ ... उहाँ स्पेनको लागि मेरो उत्तराधिकारी हुनेछ"
भने Xavi। धेरै फुटबल पन्डित्सहरूको अनुसार, यो उच्च स्तुति थियो कोकले एक किंवदंतीबाट प्राप्त गरेको थियो जसले उहाँलाई आफ्नो लिपिको रूपमा देखाए। कोकले आफ्नो क्लब सहित आफ्ना साथीहरूको प्लेटफर्म पनि कमाएका थिए जसले आफ्नो परिवार र प्रियजनहरूको उपस्थितिमा आफ्नो सम्झौता विस्तार गरे।
कुक उठ्यो कथा फेम गर्न। Instagram को क्रेडिट।
जस्तै फर्नोडो टोरास उनको संरक्षक, कोक को एक एथलेटिको मैड्रिड किंवदंती को रूप मा संधै सम्झना हुनेछ। बाकि, तिनीहरू भन्नाले, अहिले इतिहास हो।
कोक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सम्बन्ध जीवन
त्यहाँ कुनै तथ्यलाई इन्कार गर्दैन कि कोकको प्रिय साथीहरू जो हजुरआमापन, वफादारी, कडा परिश्रम र नम्रताको समावेश छ उनीहरूलाई प्यारी प्रेमीले बनाउँदैनन्। सफल स्पानीर्ड पछि, त्यहाँ बिटरिज एस्पैजेलको सुन्दर व्यक्तिमा ग्लैमरस वाग मौजूद छ।
कोकको WAG- बिट्रिज एस्पैजेल। Instagram को क्रेडिट।
As Fabwag यसलाई राखिएको छ, बिटरिज को श्री र श्रीलंका एस्सेलएल मुनोजलाई बेट्रिज एस्पैजेल जिमेनेजको रूपमा जन्मियो। उनीसँग डेभिड नामक एक सानो भाइ छ, जसले पनि आफ्नो मान्छे जस्तै फुटबल खेल्छ। यो तथ्यले बताउँछ कि उनी र कोक कसरी भेटिए।
लेखन को समयमा, बिट्रिज एक अंग्रेजी शिक्षक हो जसले वर्तमान मा अल्बान स्कूल मा काम गर्दछ। त्यो बिना मेडलिंगिंग को एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा संग एक मोडेल पनि छ।
कोक पत्नी-बिट्रिज एस्पैजेल, मेकअप बिना मोडेल। Instagram को क्रेडिट
यद्यपि उनी स्पेनी हुन् भने, बिट्रिजको अंग्रेजी क्षमताले शिक्षा र विदेशी भाषा शिक्षणमा डबल डेटको कारण आए जुन उनी 2010 मा Universidad Complutense de Madrid बाट प्राप्त गरेका थिए।
दुवै कोक र बीट्रिज एस्पजेल हालै विवाहित छन् जुन कुन भावनात्मक समारोह भनिन्थ्यो। उनीहरूको सोशल मिडिया अकाउन्टबाट निर्णय गर्दै दुवै प्रेमीहरूले 2018 को वरपर विवाह गरे।
कोक वेडिंग फोटो। Instagram को क्रेडिट
एक शक बिना, बिट्रिज र कोक एटलेटिको सबैभन्दा स्थापित जोडीहरु मध्ये एक रहेको छ। गर्मीको लागि एक जोडाको मनपर्ने उत्तेजना स्पेनको टापु र इबिजाको पानी हो।
कोक लाइट स्टोरी। Instagram को क्रेडिट।
माथि उल्लेखित रूपमा, एस्पजेल कोकसँग अति मायालु हो जसलाई उनी "राजकुमार"।
कोक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- व्यक्तिगत जीवन
के कोक टिकले के गर्छ?
फिर्ता बस्नुहोस् र आराम गर्नुहोस् जब हामी तपाईंलाई कोकको व्यक्तिगत जीवनका तथ्याङ्कहरू बारे जानकारी प्रदान गर्दछौं जुन तपाईं थाहा नहुन सक्नुहुन्न।
कोक व्यक्तिगत जीवन। Instagram को क्रेडिट
बन्द गर्दै, कोकले आन्तरिक स्वतन्त्रताको अवस्था राखेका छन्, जसले त्यसलाई व्यक्तिगत जीवनमा प्रगति गर्न सक्षम पारेको छ। उहाँ जिम्मेदार, अनुशासनशील हुनुहुन्छ र स्वयं नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ र आफ्नो दैनिक जीवनका विषयमा समय र जिम्मेवारी लागू गर्नुहुन्छ।
कोक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- पारिवारिक जीवन
कोकले आफ्ना आमाबाबु र उनको काम-कक्षा स्पेल्लियन समुदायलाई Vallecasको उदाहरण दिन्छन्। आफ्नै शब्दमा, तिनको परिवार र समुदाय मजदुर वर्गहरू भन्दा बनाइएका छन् जो विनम्र छन् र धेरै मूल्य राख्छन्।
कोकका आमाबाबुले आफ्ना छोराहरूलाई कठोर मानसिकतालाई तुरुन्तै फाइदा लिनका लागि उपस्थित छन्। आज, दुवै पुत्रहरू आफ्नो करियरमा धेरै सफल भएका छन्।
कोकको पारिवारिक जीवन। Instagram को क्रेडिट।
कुकुरको भनाइले आफ्नो आमाबाबुलाई सहज बनाउन निश्चित गर्न एटलेटिको म्याड्रिडको प्रतिज्ञाको समान छ।
"म तिनीहरूलाई आवश्यक सबै कुरा दिन चाहन्छु। यसमा म्याड्रिड मा एक हवेली शामिल छ। मैले आफ्नो बुबा र मेरो आमाको लागि उनको दुखाइको जोडीको सामना गर्न कारहरुको लागि कारहरू प्रदान गरें। उनीहरूलाई मलाई के भन्नुहुन्छ कि उनीहरूलाई के चाहिन्छ र मलाई सधैँ उनीहरूको लागि प्रदान गर्ने तरिका खोज्छ। "
कोकेले एल पाइससँगको अन्तर्वार्तामा भने। कोकेले उसको हेरचाह आफ्ना हजुरबा हजुरआमा र आफ्ना आमाबुबालाई मात्र प्रदान गर्दछ।
कोकका हजुरबुबाहरू। Instagram को क्रेडिट
Siblings: आफ्नो आमाबाबु र भाइलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, कोकका बहिनीहरूको बारेमा छोटो छ। यद्यपि, यो स्पष्ट छ कि उहाँ थोरै छ तिनीहरूलाई कुनै पनि रोशनीबाट जोगाउनुहोस्।
कोक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- LifeStyle तथ्यहरू
कोक लाइफसल्टल तथ्यहरू थाहा पाउन तपाईंले तिनीहरूलाई पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्नुहुनेछ। त्यसो भए, क्युक लाखौं फुटबलरको प्रकार होइन, जो लाशिस लाइभ जीवन बिताउने काममा सजिलै सजिलै कारहरू, बोजी, स्वागगर र सुन्दर केटीहरूसँग सजिलै ध्यान दिन्छन्।
अनुसार SillySeason, प्रति हप्ता कोक वेतन लगभग £ 192,308 छ। लेखन को समयमा उनको वार्षिक वेतन £ 10,000,000 छ। यो ठूलो कमाई को बावजूद, कोक आफ्नो पत्नी संग एक धेरै सरल जीवन बिताउँछ।
कोक लाइफस्टीले तथ्यहरू। Instagram को क्रेडिट।
कोक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- अनियमित तथ्यहरू
कोक एक पटक गन प्वाइन्टमा रोब गरिएको थियो:
यो सबै एक साँझ साँझमा भयो, दिन कोक एक पटक चिसोरी (म्याड्रिडको एक केन्द्रीय जिल्ला) मा एक मैड्रिड कार पार्क मा बन्दूकबिन्दुमा लुटिएको थियो। उहाँ आफ्नो कारमा हुनुहुन्थ्यो जब एक मोटरसाइकलमा सशस्त्र प्रहरीले तिनलाई एक बन्दूकलाई संकेत गर्यो, आफ्नो कब्जाको माग गर्यो।
कोक- एक पटक गन प्वाइन्टमा लुटियो। क्रेडिट नग्न सुरक्षा - सोफोस.
कुकुरसँग कारखाना भएको थियो जसले आफ्नो फैंसी घडीको रूपमा रिपोर्ट गरेको थियो जुन $ 77,000 मा मूल्यवान छ। कोक आफ्नो जीवन को बचाने को लागि घडी को आसपास चोर सम्म समाप्त भयो।
उहाँले सबैलाई एक मात्र छोड्नुभयो:
कोक अझै पनि च्याम्पियन लीग जित्नको लागि पर्खिरहेका छन्। क्रेडिट UEFA.com र जी समाचार.
कोकले एटलेटिकोमा उपलब्ध हरेक सम्भावित शीर्षक जितेको छ, यसको बाहेक जुन युरोपेली क्लब फुटबलमा दोस्रो सबैभन्दा धेरै महिमा हुन्छ। यसको चैंपियन्स लीग, जो प्रतियोगिता हो कोकले आफ्नो दुई फाइनल खेल्यो र हरायो।
कोकका आमाबाबुले स्पेनिश नामकरण ग्राहकहरू पछ्याउँछन्:
कोक आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई नामकरण गर्ने स्पेनिस रिजर्भेसनमा राख्छन्। कोकको मध्यस्थता छ, मेरोडो उसको आमाको छेउबाट आउँछ। यो यूगेनियोसँग विवाह गर्नु अघि आफ्नो मामको परिवारबाट एक मातृभाषा थियो।
कोक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- भिडियो सारांश
कृपया तल खोज्नुहोस्, यो प्रोफाइलको लागि हाम्रो YouTube भिडियो सारांश। दयालु भ्रमण र सदस्य बन्नुहोस् हाम्रो YouTube च्यानल थप भिडियोहरूको लागि।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो कोक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
फर्नोन्डो लेलरेन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य